तासकाे कार्ड जस्तै फिटेर भविष्य बताउँछिन क्षमता ढकाल, कसरी? – भिडियोमै हेर्नुहाेस – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > तासकाे कार्ड जस्तै फिटेर भविष्य बताउँछिन क्षमता ढकाल, कसरी? – भिडियोमै हेर्नुहाेस
admin May 1, 2018 जीवनशैली, भिडियो	0
रेकी मास्टर तथा वास्तुशास्त्री क्षमता ढकाल जो बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ । रेकीसँगै वास्तुशास्त्र, न्युमेरोलोजी र ट्यारोटमा बेलायतबाट दुईवर्षे डिप्लोमा गरेकी उनी ट्यारोट कार्डबाट भविष्य हेर्नुहुन्छ अहिले बेलायतमा राम्रो संग परिचित हुनुहुन्छ । क्षमता ढकाल बीबीसी टेलिभिजनबाट ट्यारोट कार्डमार्फत भविष्य हेर्ने ट्यारोट विशेषज्ञ क्यारोल स्जारमेनकी शिष्य हुन । ट्यारोट कार्डको इतिहास २५ सय वर्षभन्दा लामो छ ।
इसापूर्वदेखि नै युद्धमा जानेबारे साइत निकाल्न, विभिन्न कामको शुभ तथा अशुभ अवस्था हेर्नजस्ता विविध कार्य लागि इजिप्टका राजाहरूले ट्यारोट कार्डकै प्रयोग गर्थे ।विभिन्न चित्र अंकित करिब ६ दर्जन यस्ता कार्डको गड्डी फिटेर तास बाँडेको शैलीमा बाँड्दै त्यसबाट उनी भविष्य नियाल्छिन् । एक जनाको भविष्य हेर्न उनलाई करिब आधा घण्टा समय चाहिन्छ ।
आफूले मेथेटिक्स ट्यारोट कार्डबाट भविष्य हेर्ने गरेको पनि क्षमताले खुलासा गरिन् । यसरी ट्यारोटमै डिप्लोमा गरेर यो प्रविधिबाट भविष्य हेर्ने उनी पहिलो नेपाली चेली हुन् । हेरौ रेकी मास्टर तथा वास्तुशास्त्री क्षमता ढकाल कसरी तपाई को भविष्य हेर्न सक्छिन त ? लाइव भिडियो आफै बोल्छ (राजधानीड्यालीको सहयोगमा)